I-Apple ikhusela iyantlukwano kunye nokubandakanywa kwezentlalo kwividiyo entsha | Ndisuka mac
Ayizondaba zintsha zikaApple kuba ibisilwa iminyaka emininzi ukukhusela iyantlukwano kunye nokubandakanywa kwezentlalo kuzo zonke izivamvo, phakathi kwabasebenzi be brand kunye nabasebenzisi abasebenzisa iimveliso zayo. Ngesi sihlandlo sivela kuApple basungule ividiyo entsha apho babonisa wonke umntu ukuba Inkampani yakho ichasene ngokupheleleyo nemithetho emitsha yokulwa nokufudukela kuMongameli wase-United States, uDonald Trump.
Bongeze ukuba inani elipheleleyo lezikhundla eziphezulu zenkampani ziya zisanda ngokuzaliswa ngabasetyhini, into eyayimnyama ukuyibona kwiminyaka embalwa edlulileyo. Ngokwenyani ukuzama ukucacisa kukuba sonke siyafana kwaye sinenjongo yokulandela lo mgca ngokuhamba kwexesha nditsho nokwandisa iphulo lakho.
Le yividiyo abayikhuphileyo eCupertino apho babonisa khona ukubandakanyeka kwabo iyantlukwano kunye nokubandakanywa ekuhlaleni ukusuka kubasebenzi ukuya kubathengi babo:
Kungekudala, u-Apple wabiza uDenise Young Smith njengesekela mongameli we-Inclusion and Diversity kwinkampani, into ebonakala ngathi iyabhatala ngaphandle komsebenzi onzima. E-United States, iApple inabasebenzi abamalunga nama-83.000 kwaye kwenziwa inzame yokutshatisa imivuzo kunye nezikhundla phakathi kwamadoda, abafazi bazo zonke iintlanga kunye neemeko zentlalo.
Kwa-Apple bacacile malunga noku kangangokuba bade bongeza icandelo elithile kwiwebhusayithi yabo ukubonisa utshintsho olukhulu abalwenzayo kunye nokuba basebenza nzima kangakanani ukulingana kwabo bonke. vulaNgumxholo othe ngqo obonakala kweli candelo lewebhu nalapho kuboniswe ingxelo epheleleyo ebonisa, phakathi kwezinye idatha, ezinye zeengxelo ezichasene nezinye iinkampani "ezingezizo ezase-Apple" ezenziwe Kwimeko ka-Uber. Ngamafutshane, ukukhusela wonke umntu ngumsebenzi onzima kodwa xa wenziwe kakuhle kunomvuzo ngokwenene.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » I-Apple ikhusela iyantlukwano kunye nokubandakanywa kwezentlalo kwividiyo entsha
Ibhere ngoku iyafumaneka kwiApple Watch